उत्पत्ति ४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
कयिन र हाबिल (१-१६)
कयिनका सन्तान (१७-२४)
सेत र तिनको छोरा एनोस (२५, २६)
४ आदमले आफ्नी पत्नीसित सम्बन्ध राखे र उनी गर्भवती भइन्‌।+ कयिनलाई+ जन्माएपछि उनले भनिन्‌: “यहोवा परमेश्‍वरको आशिष्‌ले मैले एउटा छोरा पाएँ।” २ पछि उनले कयिनका भाइ हाबिललाई+ जन्माइन्‌। हाबिल गोठालो भए र कयिनचाहिँ किसान। ३ केही समयपछि कयिनले यहोवा परमेश्‍वरलाई भेटी चढाउन आफ्नो उब्जनीबाट केही लगे। ४ तर हाबिलले भने आफ्नो बगालबाट पहिले जन्मेका+ केही पाठा लगे र ती पाठाहरू बोसोसमेत यहोवा परमेश्‍वरलाई चढाए। परमेश्‍वरले हाबिल र तिनको भेटी स्विकार्नुभयो।+ ५ तर कयिन र तिनको भेटी भने स्विकार्नुभएन। त्यसैले कयिन रिसले चूर भए र तिनले अँध्यारो मुख लगाए। ६ तब यहोवा परमेश्‍वरले कयिनलाई भन्‍नुभयो: “तिमी किन रिसाउँछौ? तिम्रो मुख किन अँध्यारो छ? ७ तिमीले असल काम गऱ्‍यौ भने के म तिमीलाई स्विकार्दिनँ र? तर तिमीले असल काम गरेनौ भने हेर, तिमीलाई झम्टन पाप ढोकैमा ढुकिबसेको छ। तिमीले त्यसलाई जित्नै पर्छ नत्र त त्यसले तिमीलाई आफ्नो वशमा पार्नेछ।” ८ त्यसपछि कयिनले हाबिललाई भने: “भाइ, आऊ हामी खेततिर जाऔँ!” खेतमा पुगेपछि कयिनले हाबिललाई आक्रमण गरेर मारे।+ ९ पछि यहोवा परमेश्‍वरले कयिनलाई सोध्नुभयो: “तिम्रो भाइ खोइ?” कयिनले जवाफ दिए: “मलाई के थाह? म त्यसको गोठालो हुँ र?” १० तब परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो: “तिमीले यो के गऱ्‍यौ? हेर, तिम्रो भाइको रगतले भूमिबाट चिच्याई-चिच्याई मसित इन्साफ मागिरहेको छ।+ ११ अब तिमी श्रापित हुनेछौ र यस भूमिबाट खेदिनेछौ, जुन भूमिमा तिमीले आफ्नै हातले आफ्नो भाइको रगत बगायौ।*+ १२ तिमीले भूमिमा खनजोत गर्दा त्यसले आफ्नो उब्जनी दिनेछैन। तिमीले डुलुवा र भगुवा भएर जीवन बिताउनुपर्नेछ।” १३ त्यसपछि कयिनले यहोवा परमेश्‍वरलाई भने: “तपाईँले मलाई सहनै नसक्ने सजाय दिनुभयो। १४ आज तपाईँले मलाई यस इलाकाबाट निकालिदिनुभयो। तपाईँको नजरबाट म टाढा भएँ। मैले भगुवा र डुलुवा भएर जीवन बिताउनुपर्ने भयो। अनि जसले मलाई भेट्टाउँछ, उसले मलाई अवश्‍य मार्नेछ।” १५ तब यहोवा परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो: “त्यसो होइन, जसले कयिनलाई मार्छ, उसले त्यसको सात गुणा सजाय पाउनेछ।” त्यसैले कयिनलाई फेला पार्ने कसैले पनि उसलाई मार्न नपाओस्‌ भनेर यहोवा परमेश्‍वरले तिनको लागि एउटा चिन्ह* दिनुभयो। १६ त्यसपछि कयिन यहोवा परमेश्‍वरको सामनेबाट गए र अदनको बगैँचाको+ पूर्वपट्टि पर्ने भगुवाहरूको देशमा* गएर जीवन बिताउन थाले। १७ पछि कयिनले आफ्नी पत्नीसित सम्बन्ध राखे+ र उनी गर्भवती भइन्‌ र उनले हनोकलाई जन्माइन्‌। त्यसपछि कयिनले एउटा सहर बसाले र आफ्नो छोराको नामबाटै त्यस सहरको नाम हनोक राखे। १८ पछि हनोकबाट इराद जन्मिए। अनि इरादबाट महुयाएल, महुयाएलबाट मतुसाएल र मतुसाएलबाट लेमेक जन्मिए। १९ लेमेकले दुइटी पत्नी ल्याए। जेठीको नाम अदा र कान्छीको नाम जिल्लाह थियो। २० अदाले याबाललाई जन्माइन्‌। तिनले नै पालमा बस्ने र वस्तुभाउ पाल्ने चलन सुरु गरेका थिए। २१ तिनको भाइको नाम युबाल थियो। तिनले नै वीणा र बाँसुरी बजाउने चलन सुरु गरेका थिए। २२ जिल्लाहले तुबल-कयिनलाई जन्माइन्‌। तिनी तामा र फलामबाट हरेक किसिमको औजार बनाउँथे। तुबल-कयिनकी बहिनीको नाम नामाह थियो। २३ लेमेकले आफ्ना पत्नीहरू अदा र जिल्लाहको लागि यस्तो कविता रचे: “हे मेरा पत्नीहरू हो, सुन, मेरो कुरामा कान थाप, मलाई घाइते बनाउने मान्छेलाई मैले मारेँ, ममाथि आइलाग्ने जवान मान्छेलाई मैले पछारेँ। २४ कयिनलाई मार्नेसित ७ गुणा बदला लिइनेछ+ भने लेमेकलाई मार्नेसित ७७ गुणा।” २५ आदमले फेरि आफ्नी पत्नीसित सम्बन्ध राखे र उनले एउटा छोरो जन्माइन्‌। उनले उसको नाम सेत*+ राखिन्‌ र यसो भनिन्‌: “कयिनले हाबिललाई माऱ्‍यो,+ त्यसैले परमेश्‍वरले मलाई हाबिलको सट्टा अर्को सन्तान दिनुभयो।” २६ सेतको पनि छोरा जन्मियो। तिनले उसको नाम एनोस+ राखे। त्यही समयदेखि मानिसहरूले यहोवा परमेश्‍वरको नाम पुकार्न थाले।*
^ वा “जुन भूमिले तिम्रो हातबाट तिम्रो भाइको रगत पिउन आफ्नो मुख उघाऱ्‍यो।”
^ यसले चेतावनीस्वरूप दिइएको आदेशलाई जनाएको हुन सक्छ।
^ वा “नोदमा।”
^ यसको अर्थ हो, “नियुक्‍त गरिएको, राखिएको।”
^ वा “यहोवा परमेश्‍वरको नाम गलत ढङ्‌गमा पुकार्न थाले।”